Consulting ကုမ္ပဏီမှာ အလုပ်စဝင်တော့ အရင်တုန်းက ကြားခဲ့ဖူးတဲ့ အိုင်တီဟာသ တစ်ခုကို ချက်ချင်း ပြေးပြီး သတိရမိပါတယ်။ အိုင်တီသမား တွေတော့ ကြားဖူးလိမ့်မယ် ထင်ပါတယ်။
တစ်ခါက တိုးရစ်စ်တစ်ယောက်ဟာ ဆီလီကွန် ဗယ်လီ မှာရှိတဲ့ တိရိစ္ဆာန် အရောင်းဆိုင်ကို ရောက်သွားပါတယ်။ အဲဒီမှာ မျောက် ၃ ကောင်ကို လှောင်ချိုင့်နဲ့ ထည့်ထားတာ တွေ့တော့ တိုးရစ်စ်က ဈေးမေးကြည့်ပါတယ်။ ပထမဆုံး ညာဖက် လှောင်အိမ်ထဲက မျောက်ကို ဈေးမေးတော့ ဆိုင်ရှင်က ဒေါ်လာ ၅၀၀ လို့ ပြောပါတယ်။ တိုးရစ်က ဘာလို့ မျောက်တစ်ကောင်က ဒီလောက်ဈေးကြီး ရတာလည်းလို့ မေးခွန်း ထုတ်တော့ ဒီမျောက်က C နဲ့ Assembly Language သုံးပြီး ကွန်ပြူတာ ပရိုဂရမ် ရေးတတ်လို့ ဈေးကြီးတာလို့ ဆိုင်ရှင်က ပြန်ဖြေပါတယ်။ အဲဒါနဲ့ ဘယ်ဖက် လှောင်အိမ်ထဲက မျောက်ကို ဈေးမေးကြည့်တော့ ဆိုင်ရှင်က ဒေါ်လာ ၁၀၀၀ လို့ပြောပါတယ်။ တိုးရစ်စ်က ဘာလို့ ဒီမျောက်က ပိုဈေးကြီးတာလဲလို့ ထပ်မေးပါတယ်။ ဆိုင်ရှင်ကတော့ ဒီမျောက်က C++, Java နဲ့ Object-Oriented Programming ပါ တတ်တယ်။ အဲဒါကြောင့် ဒေါ်လာ ၁၀၀၀ ဖြစ်နေတာလို့ ပြန်ဖြေပါတယ်။ နောက်ဆုံးတော့ အလယ်ခေါင် အပေါ်ဖက်မှာ ချိတ်ထားတဲ့ လှောင်အိမ်ထဲက မျောက်ကို ဈေးမေးကြည့်တော့ ဒေါ်လာ ၂၀၀၀ လို့ ပြောပါတယ်။ တိုးရစ်စ်လည်း အံ့သြသွားပါတယ်။ C++ နဲ့ JAVA တတ်တဲ့ မျောက်တောင် ဒေါ်လာ ၁၀၀၀ ပဲ ပေးရတာ ဒေါ်လာ ၂၀၀၀ ပေးရတဲ့ မျောက်က ဘာတွေများ တတ်လို့လဲ လို့ ဆိုင်ရှင်ကို မေးပါတယ်။ ဆိုင်ရှင်က ဒီမျောက်က ဘာတတ်သလဲ တော့ မသိဘူး။ ဘာမှ လုပ်တာလည်း မတွေ့ဘူး။ အမြဲတမ်း လှောင်အိမ်ထဲ ငုတ်တုတ်ထိုင်နေတာပဲ။ ဒါပေမယ့် သူ့ကိုယ်သူတော့ Consultant လို့ ပြောတယ်။ အဲဒါကြောင့် ဒေါ်လာ ၂၀၀၀ တန်နေတာလို့ ပြန်ဖြေပါတယ်တဲ့။ ကျွန်တော်လည်း ဘာတတ်သလဲတော့ မသိပါဘူး။ Consulting ကုမ္ပဏီမှာ အလုပ်ဝင်တော့လည်း အလိုလိုနေရင်း Consultant ဖြစ်သွားပါတယ်။
ကျွန်တော် အလုပ်ဝင်တဲ့ Consulting ကုမ္ပဏီမှာတော့ စူ့ထက်စူ လူစွမ်းကောင်းတွေ ချည်းပါပဲ။ အများစုက အတော်လေးကို ဆရာကျ ပါတယ်။ ဆော့ဖ်ဝဲလ် ဒီဇိုင်းကို ပျံနေအောင် လုပ်ပြနိုင်တဲ့သူ၊ ဒေတာဘေ့စ်ကို ကျွမ်းထိုးမှောက်ခုံ လုပ်ပြနိုင်တဲ့သူ၊ ပရိုဂရမ်ကို လန်ထွက်နေအောင် ရေးပြ နိုင်တဲ့သူ အဲဒီလို အမျိုးမျိုး တွေ့ရပါတယ်။ ဘွဲ့တွေကလည်း ဘာဘွဲ့တွေမှန်းကို မသိပါဘူး။ မာစတာ ဒီဂရီ ကိုင်ထားတဲ့သူ မရှားတဲ့အပြင် မာစတာ ဒီဂရီကို နှစ်ခု တွဲကိုင်ထားတဲ့သူတွေလည်း ရှိပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ကုမ္ပဏီ စီးပွားရေး မကောင်းလို့ လူလျှော့တဲ့ အချိန်မှာတော့ မာစတာ ဒီဂရီ နှစ်ခု အပြင် နာမည်ကြီး အိုင်တီ လက်မှတ်တွေ တလှေကြီး ကိုင်ထားတဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ယောက် ပါသွားပါတယ်။ လက်မှတ် ဆိုတာ အလုပ်ရှာတဲ့ အချိန်မှာ ကိုယ့်ဘာသာကိုယ် ဈေးတင်ရောင်းဖို့၊ ရာထူးတက်တဲ့ အချိန်မှာ အထောက်အကူ ဖြစ်ဖို့တော့ မရှိမဖြစ် လိုပေမယ့် လက်မှတ်တွေ ကိုင်ထားပြီး တကယ် မတတ်ရင်တော့ အန္တရာယ် ရှိတယ်လို့ တွေးမိလိုက် ပါတယ်။
အစကတော့ အိုင်တီ ကုမ္ပဏီဆိုတော့ ကိုယ်တစ်ယောက်တည်း Engineering နယ်ပယ်က လာတယ်လို့ ထင်ပါတယ်။ တစ်ခါက Consultant တစ်ယောက်ကို 3G Network ဆိုတာက ဘာ Digital Signal Processing ဆိုတာက ဘယ်လို ဆိုပြီး ခပ်တည်တည်နဲ့ သွားဖောပါတယ်။ ဟိုပုဂ္ဂိုလ်ကလည်း ဘာမှ မပြောဘဲ ကျွန်တော်ပြောသမျှ နားထောင် နေပါတယ်။ နောက်တော့ ကျွန်တော်က သူ့ကို မင်းဘာနဲ့ ကျောင်းပြီးလာတာလဲ မေးတော့မှ ငါ အီလက်ထရောနစ် အင်ဂျင်နီယာဘွဲ့ ရလာတာလို့ ပြောပါတယ်။ မိကျောင်းမင်းကို ရေသွားခင်းပြ သလိုပါပဲ။ ဒါလည်း ကျွန်တော်က မလျှော့သေးပါဘူး။ စက်ရုံတွေထဲမှာ Semiconductor ထုတ်လုပ်ရေးတွေမှာ ဘယ်လို အလုပ်လုပ်တယ် ၊ စက်တွေ ဘယ်လို အလုပ်လုပ်တယ် ဘာညာနဲ့ ဆက်ပြီး ရွှီးနေပါသေးတယ်။ ကျွန်တော် ပြောသမျှ နားထောင်ပြီးတော့မှ အဲဒီ Consultant က နာမည်ကြီး အမေရိကန် ကုမ္ပဏီ တစ်ခု နာမည် ပြောပြီး ငါ အရင်တုန်းက အဲဒီကုမ္ပဏီရဲ့ Semiconductor ထုတ်လုပ်ရေး လိုင်းတစ်ခုမှာ Equipment Engineer လုပ်လာတာ လို့ ရယ်ပြီး ပြောပါတယ်။
ကုမ္ပဏီတစ်ခုလုံးက အိုင်တီသမားတွေ ချည်းပဲ ဖြစ်ရုံသာ မကပဲ ဆရာကျတဲ့ သူတွေ များတော့ အလုပ်လုပ်ရတဲ့ ပတ်ဝန်းကျင် ကတော့ အတော်ကောင်းပါတယ်။ ကိုယ်မတတ်လို့ အကူအညီ သွားတောင်းရင် အားလုံးက လိုလိုလားလား ပေးကြပါတယ်။ သူတို့ မကျွမ်းကျင်ပဲ ကိုယ် ကျွမ်းကျင်တဲ့ ကိစ္စဆိုလည်း ကိုယ့်ကို ပွင့်ပွင့်လင်းလင်း လာမေးကြတာပါပဲ။ မတတ်ပဲ ရုပ်တည်နဲ့ ဖိန့်နေတဲ့သူ ရှားပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ကုမ္ပဏီ ကို စရောက်ခါစက ထူးထူးခြားခြား သတိထားမိတာကတော့ အလုပ်ချိန်မှာ တရုံးလုံး တိတ်ဆိတ်နေတာပါပဲ။ ဒီကုမ္ပဏီက လူတွေ တစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက် စကားမပြောကြဘူးလား မသိဘူးလို့ တွေးမိပါတယ်။ နောက်တော့မှ သဘောပေါက် သွားပါတယ်။ ကုမ္ပဏီထဲမှာ ရှိတဲ့ ထိပ်ဆုံးကနေ စပြီး အောက်ဆုံးအထိ ဝန်ထမ်းတိုင်းလိုလို အလုပ်ချိန်မှာ ပြောစရာ ရှိရင် MSN ကနေပဲ ပြောကြပါတယ်။ လှမ်းပြောရင် ကြားနေပေမယ့် ဘယ်သူမှ အဲဒီလို မပြောပါဘူး။ အဲဒီတော့ ကုမ္ပဏီမှာ အလုပ်ချိန် Chat နေတာဟာ အထူးအဆန်း မဟုတ်ပါဘူး။ ( Gtalk ထဲမှာ မြန်မာလို Chat နေရင်တော့ အလုပ်ကိစ္စပြောနေတာ မဟုတ်မှန်း သိသာတာပေါ့။ :D )
အဲဒါတွင်သာ မကသေးပါဘူး။ အလုပ်ချိန်မှာ တစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက် အလုပ်နဲ့ မဆိုင်တဲ့ ကိစ္စတွေကို ရုံးထဲမှာ သီးသန့် လုပ်ထားတဲ့ ဖိုရမ်ပေါ်မှာ ဆွေးနွေး ကြပါတယ်။ တစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက် ကိုယ်ရေးကိုယ်တာ သတင်းတွေကို Facebook ကနေ တဆင့် ဝေမျှကြပါတယ်။ ဒီပုံအတိုင်းသာ သွားရင်တော့ နောက်ဆို လူတွေ ကွန်ပြူတာသာ မရှိရင် အချင်းချင်း ဆက်သွယ်တတ်ကြပါဦးမလား မသိဘူးလို့တော့ အတွေးခေါင် မိပါတယ်။
Posted by ZT at 12:37 AM
Labels: ပေါက်တတ်ကရ, ဟာသ, အတွေ့အကြုံ
ပထမ ပုံပြင်က ကြားဘူးတာ က သာလိကာ နဲ့ကြက်တူရွေးထင်တယ်။ ဟိုတစ်ယောက်ကတော့ အင်္ဂ်လိ်ပ်လိုတတ်ပါတယ်။ဒီတစ်ကောင် ကတော့ ပြင်သစ်လိုတတ်ပါတယ။် အဲဒီနောက်တစ်ကောင်ကတော့ဈေးအကြီးဆုံးပါ ဘာမှ မပြောတတ်ပေမဲ့ ဟိုနစ်ကောင် က ဆရာကြီးလို့ခေါ်ပါတယ်ဆိုလီု့ ..
နောက်ပုံပြင်ကတော့ အပ်ခုျုပ်ဆိုင်ကိုသွားတဲ့အခါ ဆရာကြွပါ ဘာချုပ်ချင်ပါသလဲ ကျှွန်တော့်ဆိုင်မှာ အားလုံးရပါတယ။် တိုက်ပုံချုပ်ချင်သလား ကုတ်ချုပ်ချင်သလား မော်ဒယ်လို အကျီချုပ်ချင်သလား ကြိုက်တာပြောပါ။
အပ်မဲ့သူက ကျုုပ်က အကောင်းဆုံးမှ လိုချငတာ
စက်ချုပ်ဆရာ.. ဟုတ်ပါတယ်ဆရာ.. ကျွန်တော့ဆိုင်ကလူတွေ အားလုံးအကောင်းဆုံးတွေချည်းပါဘ
အပ်မဲ့သူ.း ကျုပ်က ခင်ဗျား (ဆိုင်ရှင်) ချုပ်ပေးတာ ကိုလိုချင်တယ။်
စက်ချုပ်ဆရား ဟာ ဒါတော့မဖြစ်ဘုူးထင်တယ် ဆရာ.ကျွန်တော်က ပုဆိုးဘဲချုပ်တတ်တယ်။ အစအကောင်းချည်း ကို ပုဆိုးချုပ်မလို့လား ဆိုတဲ့ အကောငး်တကာ အကောငး်ဆုံးပုံပြင်ကလေးပါ သတိရမိပြီးရယ်သွာတတယ်။
တု့်မသ်လ်ု့သွားမေးတော့ you should know လို့အဖြေရပါတယ။် စိတ်နာတယ်။တစ်ကယ်။ ကြုံဘူးတာပြောပါတယ။်
နားမလည် နိုင်တော့ဘူး။ ကျွန်တော် ဘယ်အောက်များ ဆင်းမိလို့လဲ ခင်ဗျာ။ :D
သဘောပေါက်သွားပြီ။ နည်းနည်း ပိန်းသွားလို့ပါ။ ဆောရီး။ :D
May 17, 2009 at 1:15 AM
အမှန်ပဲ ကို ZTရေ.. Messenger Service တွေပေါ်လာတာ အလုပ်ကိစ္စရော၊ Personal ရော တိုးတိုးတိတ်တိတ်နဲ့အလုပ်ဖြစ်တယ်ဗျာ။ အဲလို အကျင့်က တော်တော်စွဲသွားတာဗျာ။ တခါတလ တအိမ်တည်း အတူနေတဲ့ အခန်းဖော်နဲ "..ထမင်းစားရအောင် ဟေ့ .." လို ့ပြောချင်ရင်တောင် Gtalk လေးနဲ ့မှ ကိုယ်တော်တွေ ကြွလာတာ။
နောက်တစ်ခါ တက်ဂ်ရင် သယ်ရင်းကို လာတက်ဂ်မယ်..
May 17, 2009 at 1:38 AM
သတ်ချင်သတ်လိုက်။ ရည်းစားဟောင်းများ အကြောင်းတော့ မရေးဘူး။ ဟီးဟီး။ :)
၂ခေါက်လောက်ဖတ်ပြီးမှ မမဘာကိုဆိုလိုတယ်ဆိုတာ သဘောပေါက်တယ်။ပိန်းပိန်းတွေ။ဟိ။
juneone: အကုန်လုံးကွန်ပြူတာနဲ့လုပ်နေလို့ ထမင်းကိုလည်းအောက်ဆင်းမစားပဲ ကွန်ပြူတာထဲကပုံတွေကိုပဲကြည့်ပြီးစား။
juneone: မမဆိုလိုတာ အဲလိုဟုတ်လား မောင်လေးZT
juneone: မဟုတ်ရင်တော. ဆောဒီး။
wall E ကြည့်ကြည့် အဲဒီမှာလဲ လူအချင်းချင်း ဖန်သားပြင်က ပဲ စကားပြောလွန်းလို့ လူတွေက လမ်းတောင် မလျှောက်တတ်တော့ဘူး ဆိုတာကို ပြထားတာ တော်တော်သဘောကျဖို့ ကောင်းတယ်။ :D
အင်း.. ဟုတ်တယ်.. ကွန်ပျူတာသာ မရှိရင်..!!
အင်းလေး မရှိရင်လည်း ၂၀၀၀ တန် မျောက်ကြီးလို ငြိမ်ငြိမ်လေး ငုတ်တုတ် ထိုင်နေတော့မယ်..
ခေတ်နဲ့အမီတိုးတက်လာကြတာပေါ့နော်။ :P :P
တူပါ့ တူပါ့ ရုံးကလူတွေနဲ့
နောက်လူတွေ လက်သုတ်ဖို့ မကျန်မှာစိုးလို့ပါ။ :D
2000 တန်မျောက်ဆိုလို့ အတော်သဘောကျသွားတယ်။ တို့က ZT ကို ဒိထက် မက တန်တဲ့ မျောက် ထင်ထားတာ။
ရုံးမှာလည်း MSN ပဲ သုံးတယ်။ ဖုန်းတွေ ပေးထားပေမယ့် ပြောလေ့ မရှိဘူး။ နိုင်ငံခြားရုံးတွေနဲ့လည်း ဖုန်းပြောလေ့ မရှိဘူး။ အားလုံး MSN ထဲကနေ ကွိစိကွစ လုပ်နေကြတယ်။
တို့ ရုံးကလူတွေကတော့ ဟင်းးး
လူကိုနားလေး နေတယ် ထင်နေလားမသိဘူး။
messenger နဲ့ဘဲ ဆက်သွယ်ကြတာ ရုံးတော်တော်များများရဲ့ culture ဖြစ်နေတာပေါ့နော်။ အလုပ်စလုပ်စကဆို ငါ့ကို ဘယ်သူမှ စကားမပြောကြပါလား ဆိုပြီး ဝမ်းနည်းမိသေးတယ်။ ခုတော့ ကျင့်သား ရသွားပြီ။ တစ်ခါတစ်လေ တစ်နေကုန်လုံးနေလို့ စကား တစ်လုံးမှ မပြောဖြစ်တဲ့ရက်တွေတောင် ရှိတယ်။
တရားသူကြီး နှင့် ရှေ့နေဟာသများ
ပြုံးချင်စရာ အိန္ဒိယ ဟာသများ
Wolfram Alpha ကို မေးခွန်းထုတ်ခြင်း
Open Office.org 3.1 မြန်မာ ဘာသာပြန် ဆော့ဖ်ဝဲလ်
အယူသီးမှု နှင့် ထုံးတမ်းစဉ်လာ